၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၂ ရက်က နာဇီရွာမှ ရိုဟင်ဂျာများ စစ်တပ်နှင့် ရဲအစောင့်အရှောက်များဖြင့် ဒုက္ခသည် စခန်းသို့ ပြောင်းရွေ့နေစဉ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ထုတ်လွှင့်တဲ့ NDTV သတင်းထောက်က ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါလားလို့ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရခိုင်ပြည်နယ်က အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခတွေဟာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်ပါ။ ကျွန်မ အနေနဲ့အမြဲတမ်းပြောနေတာက အစိုးရ အနေနဲ့ နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိကျတဲ့ မူဝါဒရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ ဥပဒေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဥပဒေနဲ့ အညီ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသူတိုင်းကို နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က NDTV ဖြေတဲ့အခါမှာ ထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာတင် တာဝန်ရှိတာမဟုတ်ပဲ ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာလည်း တာဝန်ရှိကြောင်း ၊တကယ်လို့ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဖက်က ခိုးဝင်နေတာတွေ ရှိနေရင်လည်း တားဆီးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း၊ အဲဒီလို မတားဆီးနိုင်ဘူးဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စဟာ ပြီးဆုံးဖို့ ခက်ခဲပါတယ်လို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြောင်းသိရပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခတွေမှာ နှစ်ဖက်စလုံးက ကျူးလွန်တာဖြစ်ပြီး ၊ မိမိအနေနဲ့ ဘက်တဘက်တည်းကို ရပ်တည်ပြီး မပြောဆိုနိုင်ကြောင်း၊ နှစ်ဖက် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိစ္စကိုသာ မိမိအနေနဲ့ ကြိုးပမ်းလိုကြောင်းလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ် မိုဒီ ခရီးစဉ် နောက်ဆုံးနေ့
ကျေးဇူးတင်ကြောင်း နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ပြောကြား
Almost Rohingya bengali are liar. They killed many rakhine people in Burma. Why you neglect it? PLease visit those website its all about Muslims Medias and Muslim Rohingya fake method and photos and documents!
http://www.youtube.com/watch?v=GNdFbqOIZqY = Rohingya fake photos liars part 1
http://www.youtube.com/watch?v=P0NriaPO2jo&feature=plcp = Rohingya fake photos liars part 2
http://www.youtube.com/watch?v=W_wDf-JWDlk&feature=plcp = Rohingya fake photos liars part 3
http://www.youtube.com/watch?v=5rVodPrFBsg&feature=plcp = Muslim Fake war crime video Burmese sub
Thank you so much RFA arrangement.
Old 88 students
Although we sympathize deeply Rohingya Muslims, they must obey Burma citizenship law 1982. All illegal Bengali (Rohingyas) must go back home if they don't have birth and death records, family trees and documents. We always agree with Daw Aung San Suu Kyi.
Nov 16, 2012 04:12 AM
Nov 16, 2012 02:16 AM
If I were from Bangladesh, I will never cross the border to bea"Prisoner" at "Home" asa"Bangali - Muslim - Kalar". BeingaRohingya" lived since the Kings' era, they have to live. Both "Rkahine" and Rohigya have same "Attitude/concept"; ie, "THEY NEVER BELIEVE A PERSON WHO IS NOT THEIR RACE" THAT THEY CALLED "RAT-KHI-TA" = "Looking after the own Race".
Nov 16, 2012 02:04 AM
There are million of Bangaladesh Buddhist Rakhine in Arakan.Rohingya running from Burma and Arakan since 1942 because you Bangala Rakhine and Bamma madeaHELL for Rohingya.Don,t point the finger to others before knowing abourt your Rakhine illeagle in Arakan.
Nov 15, 2012 11:31 PM